नेपालमा भएको सबै सम्पत्ति बिक्री गरि देश छोड्दै सुजाता! – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालमा भएको सबै सम्पत्ति बिक्री गरि देश छोड्दै सुजाता!
admin October 22, 2020 October 22, 2020 समाचार	0
काठमाडौ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइरालाले नेपालमा भएको आफ्नो ‘अन्तिम’ सम्पत्ति पनि बिक्री गर्न लाग्नुभएको छ । विराटनगरमा आफ्नो पिता गिरिजासँग प्राप्त पैतृक सम्पत्ति उहाँले पहिले नै बिक्री गरिसक्नुभएको थियो । सुजाताले ‘आफ्नो मेहनतबाट आर्जन गरेको’ साठी आना जग्गासहितको आफू बस्दै आएको मण्डिखाटारस्थित घर बिक्रीका निम्ति हालै बैना लिनुभएको छ ।
ज्ञातव्य छ, सुजाताको विवादास्पद बङ्लादेशी ज्वाइँ रुवेल चौधरी आफ्नी पत्नी मेलानीसहित बेलायतमा बस्दै आएका छन् । नेपालमा सम्पत्ति बेचेको नगद लिएर सुजाता आफ्नी छोरी(ज्वाइँसँगै बेलायत बस्न जान लाग्नुभएको हो । छोरासँग कुरा नमिले पनि सुजाताको छोरी र ज्वाइँसँग निकै राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ ।
स्मरण रहोस्, सुजाता पहिले पनि विवाह गरेर विदेशिनुभएको र २०४८ सालमा आफ्ना पिता प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र नेपाल फर्कनुभएको थियो । जीवनको अन्तिम क्षणमा गिरिजाले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्रीको दर्जासहित परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिनुभएको थियो । यतिबेला सुजाता शेरबहादुर देउवासँग बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको संयोजक र काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा उपसभापति बनाइनुपर्ने शर्त देउवासमक्ष राख्नुभएको बुझिएको छ । देउवासँग कुरा मिलाएर अघि बढ्नकै निम्ति सुजाताले केही साताअघि रामचन्द्र पौडेलहरूले पार्टीमा देउवाविरुद्ध दिएको सामूहिक उजुरीमा पहिले दस्तखत गरेर पनि पछि फिर्ता लिनुभएको थियो ।
सुजाता यतिबेला रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध वातावरण बनाउन सक्रिय रहनुभएको छ । यसो गर्दा देउवा र आफ्ना दाजुभाइ कोइरालाहरू खुशी हुने भएकोले पनि सुजाताले पौडेलविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको बताइन्छ । जे होस्, सुजाता कोइराला काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनसम्म नेपाल बस्नुभए पनि कुनै पद हात नलागे सधैंका निम्ति देश छोड्ने अब निश्चित भएको छ । श्रोत – घटना र विचार
क्यान्सरसँगको लडाईं जितेपछि संजय दत्तले खाले यस्तो रहस्य!
दशैंकै मुखैमा स्कुटर दुर्घटनाबाट गयो १९ बर्षिया युवतीका ज्यान!